Hoggaamiyihii Taliban-ta Pakistan oo lagu dilay duqeyn ay diyaaradaha Mareykanku ka geysteen gudaha Afghanistan - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldHoggaamiyihii Taliban-ta Pakistan oo lagu dilay duqeyn ay diyaaradaha Mareykanku ka geysteen gudaha Afghanistan
June 16, 2018 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Hoggaamiyihii Talibanta Pakistan Mullah Fazlullah. [Sawirka]
Islamabad-(Puntland Mirror) Hoggaamiyihii Taliban ee Pakistan ayaa lagu dilay duqeyn ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanku ay ka geysteen dalka Afghanistan.
Mullah Fazlullah ayaa ahaa ninka loogu raadinta badnaa Pakistan, kaasoo caan ku ahaa weeraro uu kamidyahay xasuuqii iskuulka ee 2014-kii oo lagu dilay 132 caruur ah iyo toogashadii 2012-kii ee gabadha Malala Yousafzai taasoo mar dambe lagu abaalmariyay Nobel Peace Prize.
Milatariga Mareykanka ayaa sheegay in ay qaadeen duqeynta oo ujeedkeedu ahaa beegsashada saraakiil sare oo maleeshiyo ah oo ku sugan bariga gobolka Kunar ee Afghanistan oo u dhow xadka Pakistan.
Mohammad Radmanish, oo ah afhayeenka Wasaaradda Gaashaandhiga Afghanistan, ayaa yiri: “Waxaan xaqiijinayaa in Mullah Fazlullah, hoggaamiyihii Taliban ee Pakistan, lagu dilay howlgal wadajir ah oo ka dhacay meel u dhow degmada Marawera ee gobolka Kunar.”
Afhayeen u hadaly ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afghanistan oo la dhaho Korneyl Martin O’Donnell ayaa sheegay in Mareykanku ay qaadeen duqeynta la dagaalanka argagixisada ah taasoo lagu beegsaday hoggaamiye sare oo katirsan urur argagixiso.
Bishii lasoo dhaafay ee Maarso, Mareykanka ayaa balanqaaday abaalmarin lacageed oo dhan $5 milyan si loo helo macluumaadka ku saabsan Fazlullah.
August 18, 2018 Xoghayihii Guud ee hore ee Qaramada Midoobay oo ku geeriyooday dalka Switzerland isaga oo 80-jir ah
March 31, 2017 Ugu yaraan 22 qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay waqooyiga-galbeed ee Pakistan
Ankara-(Puntland Mirror) Haweenka Turkiga ee katirsan ciidamada ayaa loo ogolaanayaa in ay xirtaan xijaabka markii ugu horeysay, sida lagu sheegay xeer kasoo baxay wasaaradda gaashaandhiga dalka Turkiga maanta oo Arbaco ah. Xeerka cusub ee ka [...]